AFRICOM 'uma diyaarsaneyn' weerarkii Manda Bay
Taliyaha taliska ciidamada Mareykanka ee Africa ee AFRICOM, oo guddi hoosaad ka tirsan Aqalka Senate-ka Mareykanka ay maanta su’aalo ka weydiiyeen weerarkii Al-Shabaab ay ku qaaday saldhigga Manda Bay, ayaa qiray in ciidamada Mareykanka aysan weerarkaas ugu diyaar garoobin sidii loo baahnaa.
Jeneral Stephen Townsend, ayaa sheegay in Al-Shabaab ay awood u yeesheen inay soo jebiyaan xeendaabka saldhigga Manda Bay, islamarkaana ay gudaha usoo galaan.
“Dad badan ma oga, balse saldhigga ay ciidamadeena ku nool yihiin ma ahan saldhigga la weeraray. Hase yeeshee waxay awood u yeeshaan inay soo galaan saldhigga, oo ay dilaan saddex qof oo Mareykan ah, islamarkaana ay burburiyaan lix diyaaradood. Sidaas darteed uma aynan diyaarsaneyn sidii loo baahnaa,” ayuu yiri.
Jernal Townsend ayaa sheegay inay weli baarayaan sababta ay ku dhacday in ciidamada aysan sameyn diyaar garowgii iyo feejignaantii loogaa bahnaa.
Waxa uu intaas ku daray in kadib weerarka ay halkaas geeyeen 120 askari, oo hadda xaqiijinaya amniga, islamarkaana saladhigga u yeelaya daafaca ku habboon.
Jeneral Townsend ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday in weerarkaas uu AFRICOM ku qasbay inay dib uu eegaan guud ahaan saldhigyadooda qaaradda Africa, sababtoo ah buu yiri, waxay rumeysnaayeen in saldhigga Manda Bay uu ahaa saldhig amnigiisu sugan yahay.
“Al-Shabaab waxa ay na tuseen halka ay garaaan iyo halista ay soo rogi karaan. Waxaan u baahannahay inaan taas u qaaddano si dhab ah. Sidaas darteed waxaan hadda indha furan ku eegayaa goob kasta oo qaaradda Afrika ku taalla,” ayuu yiri.
Taliya Twonsend ayaa dhinaca kale ka hadlay taageerada AFRICOM ay siiso dowladda Soomaaliya, waxaana uu sheegay inay ka kooban tahay laba qeyb.
“Labada shaqo ee weyn ee aynu hayno ayaa ah inaan gacan ka geysano tababarka laba qeyb oo ka mid ah ciidamada xoogga dalka Soomaaliya, oo ciidamada lugta ee fudud ee gaarka ah. Waxaan sidoo kale fulinaa weerar ka hortag argagixiso ah. Waxaa looga gol leeyahay inay gacan ka gaystaan dadaallada caalamiga ah iyo dadaallada Soomaalida, balse waxaa sidoo kale laga damacsan yahay inay ilaaliyaan America,” ayuu yiri.
Townsed ayaa sidoo kale sheegay in waxa ugu weyn oo ay hayaan ay tahay in ay isha ku hayaan Al-Shabaab maalin kasta, islamarkaana ay yareeyaan awooddooda.
“Waxa aan sameyno ayaa ah inaan Al-Shabaab isha ku hayno maalin kasta, waxa aan dooneyno ayaa ah inaan yareyno awooddooda meel kasta oo aan ku awoodno. Dadaalka ah in la kala dhantaalo Al-Shabaab oo la wiiqo awoodda Al-Shabaab iyo hoggaankooda, hoggaankooda dhexe iyo hoggaankooda sare ayaa qeyb ka ah waxa aan sameyno.”
Cod ahaan u dhageyso warbixintan